Imida eyahlukileyo Iingcamango - Indawo yabasetyhini, indawo yabantu
Indawo yabasetyhini kunye neendawo zabantu kwiindawo ezihlukeneyo
Iingcamango zamacandelo ahlukeneyo zilawulwa ngcamango malunga nezesini ukusuka ekupheleni kwekhulu le-18 ukuya kwekhulu le-19 eMelika. Iimbono ezifanayo zichaphazela iimboli zesini kwezinye iindawo zehlabathi. Iingcamango zamacandelo ahlukeneyo ziyaqhubeka zichaphazela abanye ukucinga ngeengxaki "ezifanelekileyo" zesini namhlanje.
Ekuqaliseni ukwahlula kwimiba yesini kwimiba eyahlukileyo, indawo yabasetyhini yayisecaleni labucala, elibandakanya ubomi bentsapho kunye nekhaya.
Indawo yamadoda yayiseburhulumenteni, kungakhathaliseki ukuba kwezopolitiko, kwihlabathi lezoqoqosho eliye lahlukana ngokubanzi nokuphila kwasekhaya njengoko i- Industrial Revolution yaqhubeka, okanye kwintlalo yoluntu kunye nenkcubeko.
Icandelo loLuntu lobuGeni okanye uLwakhiwo loLuntu lweSini
Iingcali ezininzi zelo xesha zabhalwa malunga nendlela ukwahlukana okunjalo kwendalo, kuxhomekeke kwimeko yesini nganye. Abo bafazi abafuna iindima okanye ukubonakala ebantwini bahlala befumanisa ukuba bangabonakali kwaye bengazilungelelanisi iimfuno zeenkcubeko. Ubume bezomthetho babesifazana bexhomekeke kubaxhomekeke emtshatweni kunye nangaphantsi komtshato emva kokutshata, kungabikho nazisi kunye namalungelo ambalwa okanye angabikho namalungelo abo kuquka amalungelo ezoqoqosho kunye nepropati . Eli gangatho lalingqinelana nombono wokuthi indawo yabasetyhini yayisekhaya nakwindawo yomntu ehlabathini loluntu.
Nangona iingcali zexesha zivame ukuzama ukukhusela le nkcazo yemithetho yezesini njengoko ixhomekeke kwimvelo, iingcamango zamacandelo ahlukeneyo zithathwa njengomzekelo wokwakhiwa kwezentlalo ngesini : ukuba inkcubeko kunye nezentlalo zengqondo zakha imibono yobufazi kunye nobuntu (ubuchule obufanelekileyo kunye ububungqina obufanelekileyo ) obanika amandla kunye / okanye abathintela abafazi namadoda.
Abadumi beMbali kwiiSahlulo kunye nabaTyhini
Incwadi ka-Nancy Cott ka-1977, i -Bonds of Womenhood: "I-Women's Sphere" e-New England, ngo-1780-1835, i-classic ekufundweni kwimbali yabasetyhini ehlola imbono yamacandelo ahlukeneyo, kunye nenqanaba labasetyhini likhaya. I-Cott igxininise, kwisithethe sembali yoluntu, kumava kubasetyhini ebomini babo, kwaye ibonisa indlela phakathi kwimihlaba yabo, abafazi basebenzisa amandla amakhulu kunye nempembelelo.
Abagxeki be-Nancy Cott ukuchazwa kwamacandelo ahlukeneyo kuquka uCarroll Smith-Rosenberg, owashicilela ukuziphatha kakubi: iMibono yeGender e-Victorian America ngo-1982. Akabonanga nje indlela abafazi, kwiindawo zabo ezahlukeneyo, babumba ngayo inkcubeko yabasetyhini ukungonakali koluntu, kwimfundo, kwezopolitiko, kwezoqoqosho nakwizonyango.
Omnye umbhali owathatha iimbali ezihlukeneyo kwimbali yabasetyhini nguRosalind Rosenberg. Incwadi yakhe ye-1982, iNgaphantsi kweeNgqungquthela: Iingqiqo zobuNtu boMfazi baNje , iinkcukacha zokungabikho komthetho kunye nezentlalo zabasetyhini phantsi kweengcamango ezihlukeneyo. Umsebenzi wakhe uchaza indlela abanye abafazi abaqala ngayo ukujongana nokuxhomekeka kwabasetyhini ekhaya.
U-Elizabeth Fox-Genovese naye uphikisa ingqalelo kwimida eyahlukileyo njengendawo yokubambisana phakathi kwabasetyhini, kwincwadi yakhe ka-1988 KwiNdlu yokuTyala: Abasetyhini abamnyama nabamhlophe kwi-Old South . Wabonisa amava ahlukeneyo kwabasetyhini: abo babeyinxalenye yeklasi yokuphatha njengabafazi kunye nabaqhankqalazi, abo babekhoboka, abo bafazi abakhululekileyo ababehlala kwiifama apho kungekho zikhoboka kunye nabanye abafazi abamhlophe abamhlophe. Ngaphandle kokungaxhotyiswa ngokubanzi kwabasetyhini kwiprogram yezinzalamizi, kwakungekho nanye "yinkcubeko yabasetyhini".
Ubuhlobo phakathi kwabasetyhini, okubhalwe kwizifundo ezisenyakatho ze-bourgeois okanye abafazi abahamba kakuhle, bekungabonakali kwi-Old South.
Ngokufanayo kuzo zonke iincwadi, kunye nabanye ngesihloko, ngamaxwebhu enkcubeko yeenkcubeko ezihlukeneyo, esekelwe kwingcamango yokuba abafazi basecaleni labucala, kwaye bangabafokazi kwinqanaba likarhulumente, kwaye ukuba ukutshintshwa kweyona nto yinyani lamadoda.
Ukugcinwa kwezindlu zoLuntu - Ukwandisa iNkcubeko yabasetyhini
Ngasekupheleni kwekhulu le-19, abanye abaguquleli abafana noFrances Willard kunye nomsebenzi wakhe wokunyamezela kwaye uJane Addams kunye nomsebenzi wakhe wendlu yokuhlala, baxhomekeke kwiinkalo ezihlukeneyo ukuze baqikelele imizamo yabo yokuguqulwa koluntu, ngoko ngokuzenzekelayo basebenzise kwaye banciphise ingcamango. Bobabini babona umsebenzi wabo ngokuthi "ukugcinwa kwamakhaya," ukubonakalisa koluntu "umsebenzi wabasetyhini" wokunyamekela intsapho kunye nekhaya, kwaye bobabini bathatha loo msebenzi kwiindawo zepolitiki kunye noluntu loluntu kunye nenkcubeko.
Le ngcamango yagqitywa ngokuba yi- feminism .
INational Black Women Organisation (NBFO)
Uluhlu lwababhali bezilwanyana
Imbali yeNgxabano yamaHutu-Tutsi
AmaSikh Baby Names Eqala Ngam kunye Neentsingiselo Zabo
I-Tree Tree Oil Recipes
Izixhobo ezikhethiweyo zeMfazwe yaseMelika
Yintoni eyahlukileyo phakathi kobunzima kunye nobutyebi?
Amaqhawe amabhinqa kwiLizwe laMandulo
I-Cordelia Ivela kwiNkosi yaseLear: Ubume beNgxelo
IziBulgaria, iBulgaria kunye namaBulgaria
Ibali lika-Selena Quintanilla-Perez, u-Queen of Tejano
Isifundo sovavanyo lweNzululwazi yeNtlalo
Igalari yefoto: Isikhokelo somthengi kwi-Motorcycle yama-Harley-Davidson ka-2009
Element Uphawu Inkcazo
Isikhokelo somsebenzisi kuMidlalo we-Alpine Ski Racing
Perter les plombs